क्राइम स्टोरी: मन्त्री बस्नेतकै आडमा बन फँडानी !
सिन्धुली: हरियो बन नेपालको धन भनेर सयौं वर्षदेखी राज्यसञ्चालक र बन क्षेत्रको संरक्षणमा लागेकाहरुले फलाक्न अझै छोडेका छैनन् । बन क्षेत्रको संरक्षण र प्रर्वद्धनका लागि सरकारले अर्बौ रुपैयाँ खर्च पनि गरेको छ । तर अहिले सरकार संरक्षीत त्यही बन सरकारी अधिकारीहरुकै सहयोगमा तस्करहरुको धनका रुपमा परिणत हुन थालेको छ । सिन्धुली जिल्लामा रहेको बन क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि दुईवटा डिभिजन र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना रेन्जर राखिएका छन् । तर उनीहरुको काम ठेकेदार र बन समितिका पदाधिकारीसँग समन्वयगरी बन बिनास गर्ने मात्रै रहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
सिन्धुली सदरमुकाम र मरिक्षण क्षेत्रमा रहेका दुई डिभिजन कार्यालयले जिल्लाका सबै स्थानीय निकायमा रहेका रेन्जरलाई खटाउने गर्दैआएको छ । तर तीनै रेन्जरको सहयोगमा सिन्धुलीको तीनपाटन, मरिण गाउँपालिका तथा दुधौली र कमलामाई नगरपालिका क्षेत्रमा अहिले बन फँडानी तीब्र भएको छ । दुघौलीको ४, तीनपाटनको १, मरिणको ७ र कमलामाईको ३ वटा सामुदायिक बन समितिमा अहिले काठ काट्नका लागि डिभिजन बन कार्यालयले अनुमति दिइसकेको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार तोकिए भन्दा बढी रुख काटिएको भन्दै डिभिजन बन कार्यालय सिन्धुलीमाढीले दुई साता अडाडि कमलामाई अन्र्तगतको मैनावती सामुदायिक बन समितिका अध्यक्षलाई पक्राउ गरेको थियो । तर उनी केही दिनमै छोडिएका थिए । इलाका बन कार्यालय भिमानका रेन्जरले उनीबाट मोटै रकम लाभ गरेर छोडिएको र पटक पटक उनले अध्यक्ष मार्फत फर्निचरका सामानहरु पनि लिने गरेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ ।
सामुदायिक बन समिति दर्ता गरेर आवश्यक मागजात र प्रक्रिया मिलाई ठेकेदार (बनमारा) लाई सहयोग गरेका रेन्जरहरुले त्यसवापत केही रकम लिने गरेका छन् । यता सो प्रक्रिया पुरा गराउनका लागि डिभिजन बन कार्यालयमा रहेका विकास फाँट हेर्ने रेन्जरले ठेकेदार मार्फत प्रति क्युफिट १५० रुपैयाँ लिंदै आएका छन् । सामान्यत एउटा बन समितिबाट काठ कटानको स्वीकृती आदेश दिएवापत बन कार्यालयका विकास फाँट हुर्ने रेन्जरले २ लाख रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेका छन् । अघिल्लो साल भने समितिबाट १२५ रुपैयाँ लिने गरेकोमा अहिले त्यो रकम बढेर १५० पुगेको बताइन्छ ।
तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गरेको समयमा रोकिएको बन फँडानी तथा चोरी निकासी अहिले ह्वात्तै बढेको छ । जनयुद्धका समयमा माओवादीले बन फँडानी गर्ने वा चोरी निकासी गर्नेलाई ‘जनकारबाही’ गर्ने गरेका थिए । अहिले डिभिजन बन कार्यालय सिन्धुलीमा रहेका कार्यालय प्रमुख नारायण श्रेष्ठ बन मन्त्री शक्ति बस्नेतको आडमा हरियो बनको बिनास गराउन भूमिका खेलिरहेकाछन् । श्रेष्ठले सिन्धुली पत्रकारहरुस्ँग भन्ने गरेकाछन्, ‘म बनमन्त्री शक्ति बस्नेतको मान्छे हुँ ।’
समाचार स्रोतका अनुसार आफ्नै कार्यालयका रेन्जर मात्रै होइन, कार्यालयका तल्लो तहका कर्मचारी ‘मादलार इलाका’ मा पठाउनसमेत पछि नपरेका श्रेष्ठले सिन्धुलीका केही पत्रकारलाई हात लिएर आफ्नो कालो धन्धा लुकाइरहेका छन् । समयवद्धसँगको कुराकानकिा क्रममा प्रमुख श्रेष्ठले रुख कटानको अनुमति लिएका सामुदायिक बनसमितिबाट कुनै पनि बदमासी नभएको बताएका छन् ।
उनले तोकिएभन्दा बढी रुख कटान गर्न कसैले पनि नसक्ने र बद्वासीनैं नभएपछि हाम्रा कर्मचारीले कसरी रकम पाउनलान् र ! भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । उनले कटान आदेश दिएवापत कसैले पनि रकम असुली गरेका छैनन्, डिएफओ श्रेष्ठले दावी गरे । ‘बुढा रुख धेरै छन्, त्यसलाई काट्ने र पुर्नउत्पादनलाई हुर्काउनुका साथै विदेशबाट आयात रोक्ने’ सरकारी नीति अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति दिइएको श्रेष्ठको भनाई थियो । यसैबीच बनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई डिएफओ श्रेष्ठले भन्दै आएको कुराबारे बुझ्न पटक पटक फोनसम्पर्क गर्दा फोन उठाउनु भएन ।
यो समाचार सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकले छापेको छ ।
Times 1121549	Visited.